धामीले उजाडेको दलित बस्ती : धामीले ‘सबै मर्छौ’ भनेपछि सबैले गाउँ छाडे « News24 : Premium News Channel
१७ भाद्र २०७५, आईतवार
धामीले उजाडेको दलित बस्ती : धामीले ‘सबै मर्छौ’ भनेपछि सबैले गाउँ छाडे
बुटवल । सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । हाम्रो समाज अझै पनि कुन दुनियाँमा छ ? गुल्मीको मदाने गाउँपालिका एक टोल अझै बोक्सी, धामी झाँक्रीको विश्वास र त्रासमा मानिसहरू बाचिरहेका छन् । एउटी धामी काम गर्ने महिलाले ‘यो टोल अशुभ छ । अब छिटै क्रमशः सबै मर्छौ’ भनेपछि मानिसहरू गाउँ छाडेर अर्कै स्थानमा बसाई सरेका छन् ।
यो मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर– २ , साबिकको बाँझकटेरी गाउँ हो । २०७१ सालमा त्यस गाउँका ६३ वर्षीय मनबहादुर परियारको मृत्यु भएको थियो । त्यसको ३ वर्ष पछि २०७४ साल भदौ ६ गते उनका जेठा छोरा रने परियारको पनि ३१ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो ।
छिमेकी व्राम्हण समुदायले पहिला आफूहरूले त्यस टोललाई चोख–निष्ठा राखेको तर पछि प्युठानबाट बसाई सरेर आएका ती दलित समुदायले काटमार गरेर चोख निष्ठा भंग गरेकोले मानिस र गाई भैँसी मरेको हुन सक्ने भएको भन्दै माटो हेराउन सुझाव दिए ।
मृतकका छोरा दिपक परियार लगायत गुल्मी र प्युठानको सिमानाको पटौती भन्ने स्थानमा धामी झाँक्री गर्ने ‘देविनी’ भन्ने धामी कहाँ माटो लिएर हेराउन गए । ती देविनीले माटो हेराएपछि ती दुई जनाको मृत्यु यो सुरुवात मात्रै भएको , अब प्रत्येक तीन वर्षमा सबैको मृत्यु हुने ठोकुवा गर्दै बस्ती सार्नु पर्ने बताइन ।
झाँक्रीको कुरा सुनेपछि दिपक परियार , उनका भाइहरू रमेश, दिलीप, मृतक रने परियारकी श्रीमती सहितका ६ सन्तान, उनकी आमाको बुढो घरसहित ५ घर छिमेकी जिल्ला प्युठान बसाई सरी गए ।
गत असोज महिना देखि बसाई सराई सुरु गरेका उनीहरूले अहिले सम्म पनि त्यहाँका सर–सामानहरू ओसार्दै छन् । अर्का रन बहादुर परियार पनि बाँझकटेरी कै भेडिखोर भन्ने स्थानमा बसाई सराई गरे । उनी सहित कुल ७ वटा घर , गोठ र शौचालयहरू यति वेला भताभुङ्ग छ ।
गत वर्ष सम्म हराभरा खेतीपाती हुने उनीहरूका जमिनहरू यति वेला झाडीमा परिणत भएका छन् । अहिले जम्मा एक घर देउमती परियारका परिवारजनहरू एक्लै बनेका छन् । उनीहरू पनि त्रासमा मुस्किलले बसेको बताउँछ छन् ।
अरूलाई मर्छौ भनेकी देवानी नै पहिला मरिन
बाँझकटेरीका त्यति राम्रा र ठुला–ठुला घर गोठ छाडेर अहिले प्युठान गई छाप्राहरूमा बसेका ती परिवार मध्येका दीपक परियार भन्छन् –‘हामी सबैलाई तिन वर्षको अन्तरालमा मर्छौ भनेकी देवी नै अहिले हामी भन्दा पहिल्लै मरी सकिन भन्ने थाह पायौँ । उनको कुर नसुनेको भए त्यस्ता घर गोठ र जमिनहरू छाड्न पर्दो रहेन छ । ’
उनले मुटु भने–‘ हामी आफै मिस्त्री भएकोले प्रत्येक घरहरू कम्तीमा तीन लाखमा बनाएका थियौँ । गोठ वंगला, ट्याईलेटमा पनि लगभग त्यति नै खर्च लागेको थियो । भत्काएर टिन र केही काठहरू लिएर आएका हौँ । अरू सबै खेर गएको छ । त्यस बस्तीको झल्को आई रहन्छ । रुन मन लाग्छ , फेरी त्यही फर्कऔं कि जस्तो पनि लाग्छ तर मरिन्छ कि भन्ने डरले केटाकेटी मान्दैनन् । ’
सबै गरेर करोडौँको सम्पत्ति खेर फाल्दै विस्थापित गराउने ती धामी काम गर्दै आएकी महिलाको मृत्यु भई सकेको उनीहरूले बताए पनि आधिकारिक निकायबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । उनले धेरै वर्ष देखि हेरखोर गर्दै आएको जानकारी धेरैले दिए । यसरी धामी झाँक्रीका कारण धेरैको अकालमा ज्यान गएको सुनिँदै आए पनि सिङ्गो बस्ती नै छाड्नु परेको घटना यस भेगमा यो पहिलो हो । मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष माधव भुसाल भन्छन् –‘ उनीहरूमा जनचेतनाको कमी हो । उनीहरू फर्केर आउँछन् भने हामीले पुन स्थापित गर्न सहयोग गर्दछौँ । बाख्रा पालन लगायत आय आर्जन मूलक कार्यक्रमहरू पारेर उनीहरूको जीवन स्तर उकास्छौं । उनीहरू फर्केर आउन हाम्रो अनुरोध छ । ’
त्यसै स्थानका केही दलित समुदायको यति बेला घर चुहिने भएर त्रिपाल टाँगरेर कष्टकर बसाई बसेका छन् । यस सम्बन्धमा मदाने गाउँपालिका प्रमुख दानबहादुर केसीको हामीले ध्यानकृष्ट गराएका थियौँ । चिटिक्क परेका घर गोठहरू छन् । उनीहरूले जस्ता पाता मात्रै निकालेर लगेका छन् ती घरहरूमा जस्ताले छाई दिन सके अरू घरबार विहीनहरूलाई बसाल्न सकिन्थ्यो नि ? भन्ने प्रश्नमा प्रमुख केसीले भने –‘एकदम ठिक भन्नु भयो । हामीले ती घरहरू छाएर संरक्षण गर्ने र घरबार विहीनहरूलाई बसाल्ने काम गर्नेछौँ । ’
कोसी कटानको रोकथाममा जुट्न गृहमन्त्री खाँणको निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८ डुम्रेकोट, लाहुरे खोँचमा कोसी नदीले कटान सुरु
मकवानपुरको घट्टेपाखामा ट्रक दुर्घटना हुँदा भारतीय नागरिकको मृत्यु
मकवानपुर । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–११ घट्टेपाखा नजिक आज फलाम बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा एक जनाको
खोलाले बगाउँदा झापामा एक बालकको मृत्यु
युवराज आचार्य, झापा । विरिङ खोलाले बगाउँदा झापामा एक बालकको मृत्यु भएको छ । विर्तामोड
एक्लो जीवन बिताइरहेका विवाहित/अविवाहित महिलाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने
काठमाडौं । चालिस वर्ष उमेर व्यथित गरी एक्लो जीवन बिताइरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरुले पनि
युक्रेनकाे आवासीय भवनमै रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, २१ जनाको मृत्यु
अमेरिकाले युक्रेनलाई ८२ करोड डलर बराबरको सैन्य सहयोग दिने
गिरिजाप्रसादको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ : उद्योगमन्त्री बडू
प्रधानसेनापतिद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयको भ्रमण
स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न स्तानक पास, सम्पत्ति विवरण र पुलिस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने